LOVE ISLAND မှ THEO CAMPBELL က JOSH ဒဏ်ရာပြောင်လှောင်ခံရသည်ဟုအော်ပြောလိုက်သည် - သတင်း
Theo က Josh ကိုသူ့မျက်လုံးကိုလှောင်ပြောင်ပြီးအခုပယ်ဖျက်လိုက်တဲ့ screenshots တွေထဲခေါ်လိုက်တယ်
အချစ်ဟောင်းကျွန်းသားများဖြစ်သော Josh Denzel နှင့် Theo Campbell တို့အကြားရန်ငြိုးထားခြင်းသည်မပြီးဆုံးသေးပါ။ Theo ၏မကြာသေးမီက Theo မျက်လုံးဒဏ်ရာကိုပြောင်လှောင်သည်ဟုစွပ်စွဲခံရပြီးထိုအရာကို Theo ကတောင်းဆိုခဲ့သည်။
အကယ်၍ သင်သည်အရှိန်မြှင့ ်၍ မရပါက Josh သည် Love Island မှ Kaz ကိုထွက်ခွာခဲ့သည်။ သူတို့ပြိုကွဲသွားပြီး Kaz နဲ့ Theo တို့အတူတကွစုရုံးခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက်ထိတ်လန့်ဖွယ်ကောင်းသောသတင်းတစ်ပုဒ်တွင်ပျံသန်းသောရှမ်ပိန်ဖော့ဆို့သည်သူ၏ညာဘက်မျက်လုံးတစ်ဝက်ကိုခွဲစိတ်လိုက်ပြီးနောက်မျက်စိကွယ်သွားသည်။
Instagram မှတစ်ဆင့် @ by_campbell91
Theo ကမ့်ဘဲလ်၏မျက်မမြင်ဘဝကို Theo ၏မတော်တဆမှုဖြစ်ပျက်မှုသတင်းများအပြီးတွင်သူနှင့် 'ငါ Ooop' ရုပ်ပုံများကိုတင်ပြီးနောက်တွစ်စ်ကမ့်ဘဲလ်၏မျက်မမြင်ဘဝကိုလှောင်ပြောင်သည်ဟုစွပ်စွဲခံရသည်။
မကြာခင်မှာပဲသူဟာတွစ်တာကိုဖျက်ပစ်လိုက်ပြီးကာဇတ်က Josh ကို Theo ကို 'sob story' တောင်းပန်မှုဖြင့်စာတိုပို့ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့သည်
သို့သော် Theo သည်မအောင်မြင်သေးပါ။ ယနေ့ Theo ကသူ၏ဒဏ်ရာကိုနောက်ပြောင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုစွပ်စွဲခံရသည့် screenshots များတင်ခဲ့သည် ပထမတစ်ခုကသူ၏မျက်လုံးအပေါ်သူ၏လက်ဖြင့်ညတစ်ညတွင် Josh ၏ရုပ်ပုံကိုပြသခဲ့သည်။ Theo က '' ဒီခြောက်လေးလအကွာမှာငါနဲ့ Kaz ကိုအနည်းငယ်တူးလိုက်ပြီးမင်းရဲ့ဟောင်းနွမ်းသောအရာအတွက် ... ' တကယ်တော့မင်းဘာလုပ်လုပ်ဘာပြောပြောဘာကိုမှဂရုမစိုက်ဘူး။ ငါတောင်းသမျှမှာမင်းကိုနောက်တစ်ကြိမ်တွေ့သောအခါမင်း၌ဤစွမ်းအင်ရှိကြောင်းသေချာစေရန်ဖြစ်သည်။ အမြဲတမ်းနူးညံ့သိမ်မွေ့သောသဘောနှင့်မြည်းကိုနမ်းပါ။ ဟားဟား။'
ဒုတိယကတော့ပရိတ်သတ်တွေဆီက Theo အတွက် Theo အတွက် DM ဖြစ်ပုံရတယ်။ Josh ကအရမ်းဆိုးရွားတယ်၊
The DM က Theo သည်မျက်လုံးတစ်ဖက်တွင်မျက်လုံးပြူးသွားပုံကိုတိုက်ရိုက်တူး။ 'ဖော့ဆို့ကိုဂရုပြုပါ' ဟုညတညလုံးကြွေးကြော်ခဲ့သည်ကိုကြည့်ခဲ့သည်။
Theo က Josh ကို“ ကြီးထွားရန်လိုအပ်သည်” ဟုမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပြီးယခုအခါအသက် ၃၀ နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးပုံမှာ Josh မှ Theo အထိ DMs ဖြစ်သည်။ Josh ကဤသို့ပြောခဲ့သည် - 'ငါတို့အရင်တုန်းက passa နည်းနည်းလောက်ရှိပေမယ့်မင်းမျက်လုံးနဲ့အတူငါကြားခဲ့ရတဲ့ obvs-yo ငါနင့်ကိုငါတကယ်ချစ်တယ်လို့ပြောချင်တယ်၊ မင်းကောင်းကောင်းနေနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရတဲ့သင့်အတွက် ၀ မ်းသာဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာသိသာထင်ရှားတယ်။ ကောင်းချီးမင်္ဂလာများ '။
ဘယ်လောက်ကုန်ကြမ်း cacao မြင့်မားရရနျ
Theo ရဲ့ဇာတ်လမ်းကနေ screenshots တွေအားလုံးကိုဖျက်ပစ်လိုက်ပြီ။
ဖန်သားပြင်များကိုဖျက်ပြီးသည့်နောက်သီအိုကသူ၏ Instagram ဇာတ်လမ်းကိုဤသို့ပြောခဲ့သည် - 'ငါဟာငါရဲ့ပုံပြင်တွေကိုများသောအားဖြင့်မဖျက်ပစ်ဘူးဆိုတာမင်းသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတစ်ခါတလေအဲဒါကိုမထိုက်တန်ဘူး။ ငါကြည့်ရတာမြင်ကွင်းတွေချက်ချင်းထွက်လာတာကိုမြင်ပြီး၊ ငါရည်းစားဟောင်းရဲ့ရည်းစားဟောင်းရည်းစားနဲ့အတူအချို့သောရှုပ်ထွေးမှုတွေကြောင့် 'ငါနောက်ထပ်မှတ်မှတ်ရရစာမျက်နှာပေါ်မှာမသွားချင်ဘူး' လို့စဉ်းစားမိတယ်။
ဒါကြောင့်ငါကဖျက်လိုက်ရုံပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လာမှာပါ။ ငါ shit ဖျော်ဖြေချင်ကြဘူး, ငါ့ကိုမယုံသို့မဟုတ်ငါလုပ်ဖို့ပိုကောင်း shit ရှိသည်။
“ ကျနော့်မျက်လုံးကနည်းနည်းလေးပိတ်ထားပေမယ့်မှုန်ဝါးနေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်တိုးတက်နေပါတယ်။ ဒါဆိုမင်းရဲ့နေရောင်ခြည်လေးနည်းနည်းပြပါ ဦး ။ အစဉ်အမြဲငါနောက်ဆုံးရယ်မောရှိသည်။ အမြဲတမ်းပဲ '
Josh သည် Instagram မှတစ်ဆင့်ညအချိန်တွင်ပုံဖော်ခဲ့သည် @jamesjewers
Theo ကသူ့ဇာတ်လမ်းထဲမှာဘာပြောထားလဲဆိုပေမယ့် screenshots တွေထဲမှာတော့ Josh ရဲ့ပုံဟာလုံးဝမရှင်းဘူး။ သို့သော် Josh's Instagram တွင်သူသည်တောက်ပသောလိမ္မော်ရောင်ဂျာကင်အင်္ကျီတစ်ချပ်ကို screenshots များတွင် ၀ တ်ဆင်ထားသည့်သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူညဥ့်နက်ပိုင်းတွင်မှတ်သားထားသည်။
မိဖုရား Megan Barton-Hanson ဟာဘုရင်မရှိဘဲထိုင်ပြီးထိုင်နေသောဒရာမာဇာတ်လမ်းကိုကြည့်ရှု။ မရနိုင်ပါ။ Theo ၏လတ်တလော Instagram post တွင်သူက“ Legend! သူတို့၏အပြုအမူအတွက်သင်ခေါ်ဆိုခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ ဒီလောက်နည်းနည်းလေးမျှသောလူကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် ?? ''
မှတ်ချက်ပေးရန် Tab သည် Josh Denzel ထံချဉ်းကပ်ခဲ့သည်။
Love Island တွင်အကြီးမားဆုံးစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးနောက် Amber သည်သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်လာသည်